Ndifuna abahlobo ababini abanjengoMyron Bolitar noWin Lockwood, abavela kuHarlan Coben | Uncwadi lwangoku
Idlulile. Iinoveli ezingama-11 Utyiwa ngaphakathi ngaphantsi kweenyanga ezimbini kunye nokuphinda ufunde ngokukhawuleza okokugqibela, okube yeyokuqala. Umbuzo oqhelekileyo xa ugqibezela into ekuxhase kakhulu: ndenza ntoni ngoku? Impendulo: emva koko bhala inqaku elikhethekileyo le- Olunye lothotho olumnyama kakhulu endiyifundileyo, leyo ka UMyron bolitar kunye nomhlobo wakhe onomdla Phumelela i-lockwood.
Utata wezidalwa, umbhali waseMelika UHarlan cobenInokuba wayenexesha elimnandi lokuzibeka ezicathulweni zabahlobo bakhe bahluke kakhulu, amacala amabini engqekembe enye eyindalo yomntu. Kubathandi be ukukhanya ukufunda ilayishwe ngeengxoxo ezikhawulezayo kunye neenkcazo ezichanekileyo, kunye inoveli yolwaphulo-mthetho ngaphandle kokuzenzisa ngaphandle kwezo zokuzonwabisa ngeedosi ze ezihlekisayo, isenzo kunye nabalinganiswa njengabokuqala njengoko kudaliwe ngobuzaza obufanelekileyo. Nalu ke uhlalutyo lwam.
1 UHarlan coben
2 Uthotho lweMyron Bolitar
3.1 UMyron bolitar
3.2 Phumelela i-lockwood
3.3 Ndiyathemba ukuba uDiaz
3.4 Usindi omkhulu
3.5 U-Ellen no-Alan Bolitar
3.6 Abanye abalinganiswa
3.6.1 UJessica umgwebi
3.6.2 Emily phantsi
3.6.4 I-Terese collins
3.6.5 UMickey Bolitar
4 A kodwa
5 Eyona nto ibhetele
7 Kutheni uyifunda
Wazalelwa ngaphakathi ENew Jersey NgoJanuwari 4 1962. Esi sixeko kunye ENew York ziimeko rhoqo kuthotho lweMyron Bolitar. Uphumelele kwisayensi yezopolitiko kwaye wayipapasha incwadi yakhe yokuqala ngo-1990. Kwiminyaka emihlanu kamva, waqala la manqaku. Impumelelo: Ukukhethwa kwamagama athile Abalinganiswa abasele bebethelela ubuntu kubo.
Ubhale Iinoveli ezingakumbi ezinee protagonists ezahlukeneyo, kodwa ngecebo elifanayo kunye neatmosfera. Ungumbhali wokuqala ukuphumelela Edgar, Shamus kunye noAnthony Awards Iinoveli zolwaphulo-mthetho kunye neencwadi zakhe zipapashwe kumazwe angaphezu kwamashumi amathathu. Indalo yakhe yamvanje yeyomabonwakude kolu thotho Safe.
Uthotho lweMyron Bolitar
Ndiza kuthi nangona kuthotho kuqhelekile kukhethwa ukulandela iodolo, kule meko ungaqala naphi na apho ufuna khona. I amabali okuziqukumbela kunye neereferensi eziphindaphindayo imvelaphi kunye nobuntu babalinganiswa kuzo zonke izihloko zenza kube lula ukungaphoswa nayintoni na. Ngaphandle kokuya phambili, ndiqale ngowokugqibela ekukhawuleziseni ukuthatha incwadi yokuqala ngesandla ukuya eholideyini.
Incasa esemlonyeni wam yayintle kakhulu endikhe ndayilandela kwasekuqaleni. Phakathi kwezinye izinto kuba, phantse ungabinalo uluvo malunga noluhlu okanye abalinganiswa bayo, ukuba uqala ukufunda kumntu wokuqala we-Win akutsaleli nje wena, kodwa uyaqaphela ngoko nangoko ukuba uza kuyithanda.
Ke, ukuchukumisa onke amabala emidlalo, nje ukuba sibe nebali elisetiweyo kwitenesi njengakwi basketball, igalufa okanye ibaseball. I-Basketball iyaphindwa kwezinye izihloko, kuba uMyron Bolitar wayengumdlali wobuchule ngaphambili. Ukuguqulwa kwakhe abe ligqwetha kunye nommeli wezemidlalo kuya kumkhokelela ekubeni ajongane nazo zonke iintlobo zeengxaki ezivela kubaxhasi bakhe okanye kubahlobo.
Ngumhlobo esifuna ukuba naye sonke, unyana olungileyo okanye umkhwenyana ongumama angaphupha ngaye, kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, isoka elifanelekileyo. Ukuthanda, ukungazi kakuhle kunye nokuhlekisa, uhloniphekile, zomthetho, ochaphazelekayo ngabaxhasi bakhe, usapho kunye nabahlobo. Ezothando kunye nostalgic, ubudlelwane bakho buhlala budinga icandelo lothando okanye uthando. Siyamazi kwi-30 yakhe yokuqala kwaye usahlala nabazali bakhe, U-Ellen no-Allan, eLivinstong, NJ, apho uhlala ufuna ukubuya okanye ubuye.
Ngobunzima be-superhero (Batman -Umabonwakude ka-Adam West, nceda- sisalathiso phantse kuzo zonke iinoveli), ungena engxakini yokufuna kwaye engaqondanga, uhlala ujonge inyani nobulungisa. Ibiyi owayesakuba ngumdlali webhola yomnyazi owasuswa enkundleni ngomonzakalo omkhulu. Kwaye ungumthandi we Iimvumi ezibanzi.
Funda Ekunene KwiUyunivesithi Duke, apho wadibana khona Phumelela i-lockwood, umntu ohlala naye egumbini kwaye oko kuya kuba ngumhlobo ongenakwahlukana. Iya ummeli wezemidlalo kuqala kwaye emva koko abadlali kunye nabanye abantu abadumileyo, kodwa laa superhero streak e umphandi ongahlawulwayo imfaka kuzo zonke iintlobo zeengxaki.
Igama lokwenyani: Iwindsor Horne Lockwood III. Ukusuka kusapho lwezigidigidi, unekratshi, uyinzwana entle kwaye unamaqhuqhuva, kodwa ujongeka ubuthathaka kwaye ubuthathaka ngobuqhetseba. Umda, obnoxious, nodumo lwe misanthrope, misogynist kunye ne-psychopathuyabufihla obo buntu kumnyama kuyabanda njengaye isengqiqweni kwaye ngokupheleleyo unyanisekile kwaye unesisa kubahlobo abambalwa abajonga njalo.
Akalibazisi umzuzwana ukubakhupha ngokukhawuleza ngezona ndlela zikhawulezayo eziyimfuneko. Ngaphandle kokudideka kwaye ngaphandle kokukhubeka, ngaphandle kweendleko kwaye ngaphandle kokushiya umkhondo. Uqaqambile kwaye uphumelele umcebisi wezemali emini kwaye umlindi ngaphandle komthetho ebusuku, unezakhono ezikhethekileyo zokulwa kunye nazo zonke iindlela ezikhoyo ezandleni zakhe (imali, izithuthi zabucala, abafowunelwa, izixhobo…).
Ukukhankanya igama lakhe kukwenza ungcangcazele elungileyo, embi kwaye eqhelekileyo. Ngamanye amagama, ukwangumhlobo wethu sonke esifuna ukuba naye. Kwaye i ukuba yomsebenzi.
UMyron wahlala phantsi.
"Andithandi ukuziqhayisa," utshilo uWin.
Ungomnye wabalinganiswa abambalwa boncwadi Ndikwazile ukubona " ngokulula emva kokwazi inkcazo yayo. Yayingumbono kwangoko welo mdlali ubalaseleyo waseNgilani, kananjalo enobuso obukrakra, ngubani U-Anthony Andrews, kwinguqulelo yakhe encinci kwaye yaziwa njenge nkosi USebastian flyte de Buyela kwi-Brideshead, uthotho oludumileyo lwee-80s ezinegama elifanayo nomsebenzi wokuqala we UEvelyn waugh.
Kodwa kwizizukulwana zikamabonwakude ezincinci Ndifumene umzimba onomkhondo ofanayo nolunge ngakumbi, kodwa ngalo mnqweno ungathandabuzekiyo kunye nokubalaseleyo kuka-Win: weqonga lase-Australia USimon Baker, i UPatrick Jane de Ingqondo. Ke ukuphumelela kwam kuya kuba ngumnqamlezo phakathi kwabo.
Ndiyathemba ukuba uDiaz
La umngani ogqibelele ukusuka eMyron. Kuqala eyakho unobhala kwaye phantse intombazana kuyo yonke into kwaye emva koko iba yiyo isifuba. Endala kwaye kakhulu Wwe WWE odumileyo, okanye ukubamba ngokucofa Kwinguqulelo yakhe yabasetyhini, wayesaziwa njenge IPocahontas encinci. de Imvelaphi yesiLatin, intle, ithembekile, ikrelekrele, ikhaliphile kwaye uyakwazi ukuzincama ngenxa yabahlobo bakhe ukunqanda iingxaki zabo, njengoko kunjalo Iinkcukacha zokugqibela. Uphela ekufumaneni ubuqaqawuli obudala bokujikeleza kwesekethe yokulwa kwakhona.
Okanye a ubunzima obukhulu bomfazi njengobukhulu obuthandekayo, ongenangqondo kwaye ongathandabuzekiyo. Wadibana no-Esperanza kwaye baphumelela ngokumangalisayo. Iya kuba njalo unobhala kwiarhente kaMyron kunye noncedo olukhulu kwizihlandlo ezininzi ngokunjalo. Ngumlinganiswa, kunye no-Win, apho uninzi ngcikivo Utsho uCoben xa eyichaza okanye eyiphatha.
U-Ellen no-Alan Bolitar
Los bazali I-Myron sisibini esingaqhelekanga njengoko sinamathele ngokunzulu kunyana wabo. Bathatha uninzi lwee intlawulo ngokweemvakalelo ukusuka kuMyron, obathandayo kwaye uyavuma ukuba akanazintloni ngokuhlala nabo de bafike kwiminyaka engamashumi amathathu. Ekugqibeleni uya kuthenga eyakhe indlu ukuze aqhubeke nokuba lapho xa ebuyela eLivinsgton.
UCoben uphinde aphindaphinde xa esenza okanye ethetha ngabo kuzo zonke iinoveli, exelela ii-anecdotes ezifanayo (El Al, njengeenqwelomoya zakwa-Israeli, bebhekisa kwimvelaphi yabo yamaJuda ekwangumbhali wayo).
U-Ellen Bolitar wayengummeli owaziwayo, waxhasa kwimizabalazo yokuqala yamalungelo abasetyhini. UAlan wayengumlawuli kumzi-mveliso wempahla eyolukiweyo Kwaye ihlala i-Myron ibhekisa kwi I-Olor ezidleleni zakhe xa emphuza ukuba ambulise, okanye ngokwesiko lika ukuhlala ndivukile ebusuku de wazi ukuba unyana wakhe uyeza ekhaya. Bazi esisiseko kubomi bukaMyron kwaye xa ixesha kunye nezifo zithatha uxinzelelo lwabo, uya kuziva enomdla kakhulu.
El uthando oluhlala luhleli, kodwa ngamahla ndinyuka amaninzi, ukusuka eMyron. Umbhali Ukuphumelela, ukuza kwakhe kunye nokuhamba ebomini bukaMyron kumphosela ecaleni. Emva kwekhefu lokuqala apho wamshiya khona, ubuyela kwisihloko sokuqala kwaye baqhubeka nolwalamano. Baza kuqhubeka nayo de bagqibe ngokuqinisekileyo.
El Uthando lokuqala lukaMyron ekholejini. Ungumlinganiswa ophambili Uloyiko olunzulu, apho acela khona uMyron ngoncedo lokufumana umnikelo wolahleko wethambo kunyana wakhe ogulayo.
Omnye wabalinganiswa abathile. Ummeli wangaphambili weMossad, ihlala ivela transvestite kunye nentshebe engqindilili, ethetha kumntu wesithathu kwaye elungele nantoni na. Siyazi njengokuba lutshaba kaMyron, lowo afuna ukumbulala kube kanye, emva koko abe umanyene.
Uthando olukhulu noluchanekileyo ukusuka eMyron. Umntu omqhelileyo intatheli, umsasazi kamabonwakude, adibana naye uMyron ngethuba emva kokuhlukana kwakhe noJessica nasemva kwetyala elimshiya ephawulwe kakhulu. Ukubalekela kwakhe kwisiqithi kunye naye, naye onobungozi obukhulu buya kuba sisiqalo sothando oluphazanyiswa iminyaka eliqela kodwa luphinde luvele Ukunyamalala. Esi sihloko kuphela kwendawo apho uCoben efumana khona umntu wokuqala ukusuka eMyron. Ikwangoyena wamazwe aphesheya, ibekwe eParis naseLondon, phakathi kwezinye iindawo.
El umtshana ukusuka eMyron. Unyana womntakwabo UBrad kunye noKitty Bolitar, Umfazi onengxaki onika uMyron ngaphezulu kwentloko. Ngaba ngabalinganiswa abaphambili be IAlta tensión, apho ukongeza ekuncedeni owayesakuba ngumdlali we-tennis ukukhangela umyeni wakhe olahlekileyo, uMyron uza kuphinda eve kumntakwabo, owemnke kudala engenamkhondo.
UMickey uza kugcina ngokuhlala nootatomkhulu wakhe emva kokoyisa iingxaki kumalume wakhe. Kukwanjalo umdlali webhasikidi omkhulu kwaye iya kunceda uMyron kwimeko yesihloko sokugqibela, Kuthe cwaka ixesha elide. Kukwanjalo ophambili kuthotho lolutsha lwezihloko ezintathu. Kuphela abokuqala abafikile apha, Indawo yokubalekela.
Mhlawumbi kunjalo ukusilela kwe uhlalutyo uncwadi Oku kwenzeka kwisihloko sokugqibela, apho umlinganiswa omiselwe ukubonakala ecacileyo kwibali elidlulileyo, ephinda avele khona. Kungenzeka ukuba uphakathi kothotho lweMickey Bolitar, lo mlinganiswa uphinde waphuhliswa. Kodwa kuyaphazamisa abafundi beMyron.
Ukuqaqambisa into phakathi koburharha, ubalisa obubalisayo kunye nesenzo esiqhelekileyo, ndiza kuthi umntu wokuqala de UMyron en Ukunyamalala. Kodwa kufuneka ndibonise ukuba Ndinobuthathaka kobo buncedo kwaye ke ndihlala ndibathanda abalinganiswa ukuba "bathethe nam" ngokuthe ngqo. Xa ungene Kuthe cwaka ixesha elide es Win Lowo uthetha ngokungenelela kwakhe, uCoben ugqiba umsebenzi we-10.
Ukufa kwindawo ye-18
Inyathelo elinye elingalunganga
Umbane ophezulu. Yayiyimbasa yeRBA yenoveli yolwaphulo-mthetho.
Kuthe cwaka ixesha elide
Ngaba kubonakala kuyinto encinci kuwe? Kulungile, yiza, amagama amathathu: kumnandi, i-myron kwaye iphumelele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Ndifuna abahlobo ababini abanjengoMyron Bolitar noWin Lockwood waseHarlan Coben
URossana Viggiano sitsho
Ndiyaluthanda uthotho kwaye ndiyathemba ukuba uHarlan Coben uza kusinika inombolo ye-12 kolu ngcelele ukuze kungabikho mathandabuzo. Unyanisile, uMyron kunye noWin bayanyanga.
Phendula uRossana Viggiano
Ndiyathemba ukuba kukho izinto ezintsha eziza kwenzeka eMyron kunye noWin, ewe. Ndiyabakhumbula. Enkosi ngengcaciso yakho.
UAlmudena Rueda sitsho
Olu luhlu luyandikhapha ngexesha lokuvalelwa kwaye luyandonwabisa kakhulu. Ndizifunda ngaphandle komyalelo, kodwa andikhathali ngayo nantoni na.
Bancokola ukusuka kumzuzu wokuqala, kucetyiswa kakhulu.
Phendula uAlmudena Rueda
Ndihlala ndicinga u-Win ngokomlingisi owayedlala umntakwabo Frasier
Ababhali ababesaziwa emva kokufa kwakhe